Hihaona amin'ny Farihy Panama, ny mampiavaka azy | Vaovao momba ny dia
Monica sanchez | | America, Toerana fitsangatsanganana, General
Ny farihy dia fahagagana izay tsy maintsy tandrovina mba hahamaro ny maro amintsika no afaka mitsidika azy ireo. Amin'ny tranga izay ho hitanao any Panamà dia tena mahavariana izy ireo, na dia artifisialy aza ny ankamaroan'izy ireo. Saingy feno zavamaniry tropika sy zavamaniry izy ireo izay hahatonga anao hahatsapa ho ao an-trano ... na mbola tsara kokoa aza, satria ny rivotra madio sy ny natiora mihitsy dia afaka manampy anao hahafantatra bebe kokoa ny tenanao.
Te-hitsidika ny farihin'i Panama ve ianao? Aza matahotra, fa amin'izao fotoana izao dia tsy mila mandao ny tranonao ianao, na dia mety maniry ny hividy tapakila fiaramanidina aza ianao aorian'ny nahitanao azy rehetra.
2 Farihy Gatun
3 Farihy Alajuela
5 Farihy Miraflores
6 Toetran'ny toetr'andro any Panama
7 Zavatra tokony ho fantatrao alohan'ny handehanana any Panama
7.1 Azo antoka ve?
7.2 Mila manao vaksiny ve ianao?
7.3 Inona ny vola ampiasain'izy ireo?
8 Inona no tsy tokony ho hita ao anaty valizinao
Hanomboka hitsidika ny Lagoon Chiriquí, izay iray amin'ireo manintona indrindra ny firenena. Ity haon-dranomasina ity dia mifandray amin'ny vondronosy Bocas del Toro, hatrany amin'ny sisin-tany atsimo atsinanan'i Costa Rica, ary mizara ho amin'ny farihy Chiriquí atsinanana ary ny helodranon'i Almirante andrefany. Eo anelanelan'ny roa dia hahita saikinosy isika, ny nosy Popa sy Cayo de Agua.
Manohy ny diantsika mandinika ny Farihy Gatun. Io dia farihy artifisialy miorina ao amin'ny Canal Panama izay noforonina teo anelanelan'ny 1907 sy 1913 noho ny fananganana ny tohodranon'i Gatún, amoron'ny renirano Chagres. Tamin'izany fotoana izany dia io no farihy artifisialy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ary ankehitriny dia manana velaran-tany 435km2, miorina amin'ny 26m ambonin'ny haavon'ny ranomasina.
Tsy mila mandeha lavitra be amin'ilay toerana izahay, fa nahita farihy artifisialy iray hafa koa: ny an'ny Alajuela, izay manana ny anarany any amin'ny faritanin'ny rahavavy repoblika Costa Rica. Izy io koa dia noforonina teny amin'ny Ony Chagres, avy amin'ny tohandranon'i Madden.
Raha nieritreritra ianao fa nahita izany rehetra izany, ny marina dia izany ny lagoon any San Carlos hiahiahy ny faharesen-dahatrao izany. Miaraka amin'ny velaran-tany roa hektara, voahodidin'ny flora tropikaly tanteraka izy io Mahatalanjona. Ankoatr'izay, azoko antoka fa raha nanonofy ala virjiny ianao, rehefa mankany amin'ity toerana ity ianao dia ho fantatrao fa tanteraka izany nofy izany.
Vitanay ny fitsidihany anay amin'ny alàlan'ny Farihy Miraflores, izay farihy artifisialy mifandraika amin'ny Lakandranon'i Panama Ary dimy ambin'ny folo minitra fotsiny ny renivohitra! Ampahany amin'ny valan-javaboary Camino de Cruces izy io ary tena ilaina amin'ny tanànan'ny San Felipe, Curundú, Ancón, ankoatry ny hafa, satria ny tobim-panafody rano Miraflores dia mitondra ny rano ilain'ireo toerana ireo.
Toetran'ny toetr'andro any Panama
Te-handehandeha any ve ianao? Raha izany dia mety te hahafantatra ny toetr'andro any Panama ianao, sa tsy izany? Satria mba hankafizanao ireo toerana tsy mampino ireo ilaina ny manangona ny akanjo sahaza azy.
Ary koa. Firenena iray izay manoratra mari-pana mafana amin'ny taona rehetra i Panama. Ankehitriny, tokony ho fantatrao fa misy faritra roa: ny iray izay tropikaly matetika, miaraka amin'ny mari-pana eo ho eo amin'ny 22ºC ary misy be ny rotsakorana, toy ny any Chiriquí ohatra; ary ny iray hafa misy toetr'andro somary mangatsiaka izay mangatsiaka ihany, satria ny salan'isan'ny mari-pana dia 18ºC ary, amin'ny volana mangatsiaka indrindra, dia afaka midina hatramin'ny -3ºC, toy ny any amin'ny faritra avo kokoa.
Ka, ny fivezivezena eto dia tsara ny maka akanjo fahavaratra, nefa tsy manadino palitao, raha sanatria. Eny ary, aza adino ny palitao.
Zavatra tokony ho fantatrao alohan'ny handehanana any Panama
Te hahafantatra bebe kokoa momba an'i Panama ve ianao? Aza adino ny antsipiriany momba izay holazaiko anao eto ambany:
Firenena milamina sy azo antoka amin'ny ankapobeny ity. Raha ny marina dia tonga amin'ny lisitr'ireo Firenena mahery setra 5 kely indrindra Avy amin'ny kaontinanta amerikana. Ka tsy hisy ny hampanahy.
Mila manao vaksiny ve ianao?
Tsy takiana izany, fa toro-hevitra amin'ny vaksinin'ny mavo mavo. Raha tsy dia tianao loatra ny fanjaitra dia azonao atao ny misafidy ny hitondra fanafody moka.
Inona ny vola ampiasain'izy ireo?
Ny vola eo an-toerana dia Dolara amerikana, noho izany dia soso-kevitra ny hanakalo euro amin'ny dolara alohan'ny handehanana.
Inona no tsy tokony ho hita ao anaty valizinao
Rehefa mandeha amin'ny toerana vaovao isika dia manana fisalasalana be foana momba izay azontsika atao na tsy azontsika entina ao anaty valizy. Raha izany no anao, ity misy lisitr'ireo zavatra tsy azonao avela ao an-trano:
Fakan-tsary: mba hisamborana ireo sary miavaka tsara indrindra sy hitehirizana ny fotoana tsara indrindra.
Pasipaoro sy visa: Raha tsy misy azy ireo dia tsy afaka mandeha any Panama izahay.
Masoandro: milentika masoandro nefa tsy mila miahiahy na inona na inona.
Boky, magazine, mandrehitra: Raha te hamaky ianao dia aza misalasala mitondra boky miaraka aminao.
Smartphone: mifandraisa amin'ireo olon-tianao indrindra rehefa mankafy ny fialan-tsasatrao.
Mirary fahafinaretana any amin'ny farihin'i Panama.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Farihy Panama
Ny farihy no zava-dehibe indrindra satria any Panama izy io
Amin'ity indray mitoraka ity dia hihaona amin'ireo farihy manan-danja indrindra any Panama izahay. Andao atomboka ny fitsidihana ao amin'ny Farihin'i Gatun, farihy artifisialy izay fandalovana ho an'ny sambo mandalo ny Lakandranon'i Panama. Ny farihy dia noforonina tamin'ny 1913, ary manana velaran-tany 425 kilometatra toradroa.
Amin'ny lafiny iray, ny farihy Alhajuela dia farihy artifisialy iray hafa, izay eo amoron'ny Ony Chagres, ary misy ifandraisany amin'ny Lakandranon'i Panama ihany koa. Ny farihin'i Alhajuela dia fitoerana ho an'ny lakandrano.
Drafitra dimy hankafizana ny hafanana amin'ny Paska (II)